Забур 97 CARS - Nnwom 97 AKCB
1Awurade di hene, ma asase ani nnye;
ma akyirikyiri mpoano ahorow no nsɛpɛw wɔn ho.
2Omununkum ne sum kabii atwa no ho ahyia;
trenee ne atɛntrenee yɛ nʼahengua no fapem.
na ɛhyew nʼatamfo wɔ afanan nyinaa.
4Nʼanyinam hyerɛn wiase;
asase hu na ne ho popo.
5Mmepɔw nan sɛ nku wɔ Awurade anim,
6Ɔsoro pae mu ka ne trenee kyerɛ
na aman nyinaa hu nʼanuonyam.
7Ahonisomfo nyinaa anim agu ase,
wɔn a wɔde abosomhuhuw hoahoa wɔn ho no,
8Sion te, na ne ho sɛpɛw no
na Yuda nkuraa ani gye
Awurade, esiane wʼatɛntrenee nti.
9Wo, Awurade ne Ɔsorosoroni wɔ asase so nyinaa;
10Ma wɔn a wɔdɔ Awurade no nkyi bɔne,
ɔbɔ ne nkurɔfo a wɔyɛ nokwafo no ho ban
na ogye wɔn fi amumɔyɛfo nsam.
11Hann hyerɛn wɔ atreneefo so
na anigye ba wɔn a wɔn koma mu tew no so.
12Momma mo ani nnye Awurade mu, mo a moyɛ atreneefo,
AKCB : Nnwom 97